चन्द्रमा के हो: विशेषताहरु, संरचना र craters | नेटवर्क मौसम विज्ञान
चन्द्रमा के हो
हाम्रो ग्रहमा एउटा खगोलीय पिण्ड छ जसलाई परिक्रमा गरी चन्द्रमा भनिन्छ। जे होस्, त्यहाँ अझै पनी हामी रात को समयमा देख्छौं, धेरै मानिसहरु लाई वास्तव मा थाहा छैन चन्द्रमा के हो। हामी हाम्रो उपग्रह को बारे मा कुरा गर्दैछौं कि गुरुत्वाकर्षण बलहरु को कारण हो कि ज्वार र पृथ्वी मा अन्य पक्षहरु को उत्पत्ति। हाम्रो उपग्रह अद्वितीय विशेषताहरु र बिभिन्न आन्दोलनहरु छन् कि जान्न को लागी धेरै रोचक छन्।
तेसैले, हामी यो लेख समर्पित गर्न जाँदैछौं कि तपाइँ चन्द्रमा के हो, यसको विशेषताहरु, मुख्य आन्दोलनहरु र यसको craters के हो बताउन।
1 चन्द्रमा के हो
2 चन्द्रमामा कुन चाल हुन्छ?
3 मुख्य विशेषताहरू
चन्द्रमा पृथ्वीको प्राकृतिक उपग्रह हो र पृथ्वीको स्वामित्वमा रहेको एक मात्र उपग्रह हो। निस्सन्देह, यो रिंग वा उपग्रह बिना चट्टानी खगोलीय शरीर हो। त्यहाँ यसको गठन को व्याख्या गर्न को लागी धेरै सिद्धान्तहरु छन्, तर सबैभन्दा स्वीकार्य यो हो कि यसको उत्पत्ति लगभग ४५ मिलियन वर्ष पहिले भएको थियो, एक मंगल ग्रह जस्तै वस्तु पृथ्वी संग टकराव पछि। चन्द्रमा यी टुक्राहरु बाट बनेको हो र १०० मिलियन बर्ष पछि, पिघलेको म्याग्मा क्रिस्टलाइज भयो र चन्द्र क्रस्ट बनायो।
चन्द्रमा पृथ्वी बाट ३ 384४,४०० किलोमिटर टाढा छ। सूर्य पछि, यो पृथ्वीको सतह बाट देखिएको सबैभन्दा चम्किलो आकाशीय शरीर हो, यद्यपि यसको सतह वास्तव मा अँध्यारो छ। यो पृथ्वीको २ 400 वटा पृथ्वी दिन (२,,३२२ दिन वा 27५५.27३ घण्टा) मा घुम्छ र एउटै गतिमा घुम्छ। किनकि यो पृथ्वी संग समकालिक घुमाउँछ, चन्द्रमा उनको जस्तै अनुहार छ। वर्तमान प्रविधिको कारणले गर्दा, यो राम्ररी थाहा छ कि "लुकेका अनुहारहरु" मा क्रेटरहरु, डिप्रेसनहरु जसलाई थालासोइड भनिन्छ, र कुनै समुद्र छैन।
चन्द्रमाको अवलोकन मानव जत्तिकै पुरानो हो। उनको नाम धेरै सभ्यताहरुमा देखा पर्दछ र उनीहरुको पौराणिक कथा को हिस्सा पनि हो। यो पृथ्वी को चक्र मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ: यो पृथ्वी को गति मा यसको अक्ष मा विनियमित, जो जलवायु अपेक्षाकृत स्थिर बनाउँछ। अरु के छ त, यो स्थलीय ज्वार को कारण हो किनकि उनीहरु गुरुत्वाकर्षण को आकर्षण द्वारा उत्पादन गरीन्छ, जो एक तर्फ बल संग पानी तान्छ र अर्को बाट यो आकर्षित, उच्च ज्वार र कम ज्वार को कारण।
चन्द्रमा र पृथ्वी को बीच गुरुत्वाकर्षण बल को अस्तित्व को कारण, यो उपग्रह पनि प्राकृतिक आन्दोलन छ। हाम्रो ग्रह जस्तै, यो दुई अद्वितीय आन्दोलनहरु छ, घुम्ने र पृथ्वी को चारै तिर अनुवाद भनिन्छ। यी आन्दोलनहरु चन्द्रमा को विशेषता हो र ज्वार र चन्द्रमा को चरण संग सम्बन्धित छन्।
उसलाई केहि समय चाहिन्छ उसको आन्दोलन समाप्त गर्न सक्षम हुन। उदाहरणका लागि, एक पूरा अनुवाद सर्कल २..३२ दिन को एक औसत लाग्छ। चाखलाग्दो कुरा, यो चन्द्रमा सधैं हामीलाई एउटै अनुहार देखाउँछ, र यो पुरा तरिकाले निश्चित देखिन्छ। यो धेरै ज्यामितीय कारणहरु र चन्द्र कम्पन भनिने अर्को आन्दोलनको कारण हो।
जब पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा गर्दछ, चन्द्रमा पनि घुम्छ, तर पृथ्वी मा यो पूर्व मा छ। सम्पूर्ण आन्दोलन को समयमा, चन्द्रमा देखि पृथ्वी को दूरी धेरै भिन्न हुन्छ। यो दूरी पुरा तरिकाले मा निर्भर गर्दछ जब तपाइँ यसको कक्षा मा हुनुहुन्छ। किनकि कक्षा एकदम अराजक छ र कहिले काहिँ टाढा छ, सूर्य को यसको गुरुत्वाकर्षण मा काफी प्रभाव छ।
हाम्रो घुमाउने उपग्रह को आन्दोलन अनुवाद संग सिnch्क्रोनाइज्ड छ। यो २..३२ दिन सम्म रहन्छ, त्यसैले हामी सधैं चन्द्रमा को एउटै पक्ष देख्छौं। यसलाई सिडेरियल चन्द्र भनिन्छ। यसको रोटेशन को समयमा, यो अनुवाद को अण्डाकार को विमान को सम्मान संग 88,3 डिग्री को झुकाव को एक कोण बनाउँछ। यो गुरुत्वाकर्षण बल को कारण हो कि चन्द्रमा र पृथ्वी को बीच बनाउँछ।
चन्द्रमा एक ठोस चट्टानी सतह छ, र यसको सबैभन्दा उल्लेखनीय विशेषता craters र बेसिन को एक ठूलो संख्या को उपस्थिति हो। किनभने यसको वातावरण धेरै कमजोर छ र लगभग अस्तित्व मा छैन, यो क्षुद्रग्रह, उल्कापिण्ड वा अन्य आकाशीय पिण्डहरु को प्रभाव को सामना गर्न सक्दैन, उनीहरुलाई चन्द्रमा संग टक्कर गर्न को लागी अनुमति दिईन्छ।
प्रभावले मलबेको एक तह पनि उत्पादन गर्‍यो, जुन ठूलो चट्टान, कोइला, वा ठीक धूल हुन सक्छ, जसलाई इरोडेड लेयर भनिन्छ। अँध्यारो क्षेत्र लगभग 12-4,2 मिलियन वर्ष पहिले एक लावा कभर बेसिन हो, र उज्यालो क्षेत्र तथाकथित हाइल्याण्ड्स गठन। सामान्य मा, जब चन्द्रमा भरिएको छ, यो एक मानव अनुहार वा केहि संस्कृतिहरु को अनुसार एक खरगोश को छवि बनाउन को लागी देखिन्छ, यद्यपि वास्तविकता मा यी क्षेत्रहरु चट्टान को फरक संरचना र उमेर को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यसको वातावरण, exosphere भनिन्छ, धेरै पातलो, कमजोर र पातलो छ। उल्कापिण्ड, धूमकेतु र सतह संग क्षुद्रग्रह को यो टक्कर को कारण बारम्बार छन्। केवल हावा जो धूल आँधी पैदा गर्न सक्छ रेकर्ड गरीएको छ।
वैज्ञानिकहरु हाम्रो ग्रह र चन्द्रमा मा चट्टानहरु को उमेर अध्ययन गरी रहेको छ। यी चट्टानहरु एक चिह्नित क्षेत्र हो कि निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ जब गड्ढा गठन। चन्द्रमा को सबै क्षेत्रहरु को अध्ययन गरेर जो हल्का रंग र पठार भनिन्छ, वैज्ञानिकहरुले चन्द्रमा को गठन को बारे मा जानकारी पाए। यो लगभग ४460० देखि ३380० मिलियन वर्ष पहिले गठन भएको थियो, र बाँकी चट्टानहरु कि चन्द्रमा को सतह मा खसेको रिपोर्ट गरे कि यो धेरै छिटो गठन भयो। चट्टान स्नान बन्द भयो र केहि craters तब देखि गठन भएको छ।
यी craters बाट लिइएको चट्टान नमूनाहरु को केहि बेसिन र भनिन्छ यसको उमेर लगभग ३3.800०० देखि ३१०० मिलियन बर्ष छ। त्यहाँ विशाल क्षुद्रग्रह जस्तै वस्तुहरु को नमूनाहरु छन् कि चन्द्रमा हिट जब rockfall बन्द भयो।
चाँडै यी घटनाहरु पछि, प्रचुर मात्रामा लाभा सबै बेसिनहरु भरीयो र एक अँध्यारो सागर गठन भयो। यो बताउँछ किन समुद्र मा केहि craters छन्, तर पठार मा धेरै craters छन्। यो ठीक छ किनकि चन्द्रमा को सतह सौर्यमण्डल को गठन को समयमा यी तारामंडलहरु द्वारा बमबारी गरीएको थियो, त्यहाँ पठार मा धेरै लावा प्रवाह थिएन कि मूल craters गायब को कारण थियो।
चन्द्रमा को सबैभन्दा टाढा भाग मात्र एक "समुद्र" छ त्यसैले वैज्ञानिकहरु विश्वास गर्छन् कि यो क्षेत्र ४ अर्ब वर्ष पहिले चन्द्रमा को गति द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ.
चन्द्रमा मा craters अध्ययन गर्न, हामी चन्द्रमा को भूगोल बुझ्नु पर्छ। र धेरै मैदानहरु कि सपाट वा कि एक पटक समुद्र को हिस्सा थिए। अचम्मको कुरा, त्यहाँ चन्द्रमा को चन्द्रमा मा एक महासागर पनि छ। ती मध्ये सबैभन्दा ठूलो मारे Imbrium हो, स्पेनी मा मार डे Lluvia भनिन्छ, लगभग 1120 किलोमीटर को व्यास संग।
मलाई आशा छ कि यो जानकारी संग तपाइँ चन्द्रमा के हो र यसको विशेषताहरु को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » चन्द्रमा के हो
उल्का के हो?
पृथ्वी को इतिहास